30ka Dariiqo ee ugu Wanaagsan ee lagu Horumarin karo Ganacsigaaga- Lacag La'aan iyo Lacag La'aan | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/30ka Dariiqo Ee Ugu Wanaagsan Ee Lagu Horumarin Karo Ganacsigaaga- Lacag La'aan Iyo Lacag La'aan
30ka Dariiqo Ee Ugu Wanaagsan Ee Lagu Horumarin Karo Ganacsigaaga- Lacag La'aan Iyo Lacag La'aan
0 Daqiiqado 18 ayaa akhriyay
Si aad u noolaato oo aad u korto, ganacsigaagu wuxuu u baahan yahay macaamiil. Si aad macaamiil u hesho, waxaad u baahan tahay inaad horumariso ganacsigaaga. Waagii hore ee wanaagsanaa, tani waxay ahayd arrin lagu go'aaminayo inta u dhaxaysa warqad-waraysi, buug-yaraha, kaadhka boostada, ama xayaysiisyada wargeysyada maxalliga ah.
Laakin dunidan dhijitaalka ah ee maanta, suurtogalnimada waa mid aan dhammaad lahayn (akhri: xad dhaaf ah).
Haddaba haddii aad ku dhibtoonayso inaad ogaato siyaabaha ugu wanaagsan ee aad kor ugu qaadi karto ganacsigaaga; ama xataa waxa ikhtiyaarkaagu yahay, ma tihid (a) keligaa ma tihid iyo (b) meesha saxda ah.
Maqaalkan, waxaan ku dabooli doonaa 30-ka siyaabood ee ugu waxtarka badan ee kor loogu qaadi karo ganacsigaaga, haddii aadan lahayn miisaaniyad, miisaaniyad xaddidan, ama qol wareeg ah. Waxaan dul mari doonaa sida ereyga loo faafiyo iyadoo la tixgalinayo:
Matoorada raadinta (sida, Google Search iyo Maps).
Kanaalada warbaahinta bulshada (ay ku jiraan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, iyo Pinterest).
Liisaska hagaha khadka tooska ah (waxaa jira in ka badan inta aad malaynayso!)
Bulshada deegaankaaga (dhacdooyinka, kafaalaqaadyada, iyo saxaafadda).
Horumarinta ganacsigaaga waa waajib haddii aad rabto inaad istaagto kala go ' ka tartamayaashaada iyo u baxay macaamiishaada, markaa aan ku bilowno kanaalka ugu caansan: Google.
Sida loo horumariyo ganacsigaaga Google
Isticmaalka Google si kor loogu qaado ganacsigaaga waa wax aan maskaxda ku jirin. Qabashada in ka badan 90% saamiga suuqa, waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu horgeeyo macaamiisha kuwaas oo si firfircoon u raadinaya xalalka. Waa kuwan siyaabaha ugu wanaagsan ee loo isticmaalo Google si aad magacaaga halkaas uga hesho:
1. Abuur oo xaqiijiyo Xogta Ganacsigaaga Google
Profile-ka Ganacsiga Google-ka (Ereyga Google ee liiska Google-ka) waa waxa u oggolaanaya ganacsigaaga inuu ka soo muuqdo natiijooyinka Khariidadaha Google, qaybta maxalliga ah ee natiijooyinka raadinta Google, iyo sidoo kale-marka qof ku qoro magaca ganacsigaaga (fikradaha magacyada ganacsiga hal-abuurka ah ee halkan !) iyo goobta - Guddiga Aqoonta ee dhinaca midig ee natiijooyinka raadinta. Marka Google uu ka sii fiicnaado oo uu ka sii fiicnaado in uu natiijadiisa geeyo goobta wax baadha, liiskan bilaashka ah waa in uu noqdaa mudnaanta koowaad.
Furaha isticmaalka Xogta Ganacsigaaga si kor loogu qaado ganacsigaaga waa in la xaqiijiyo lahaanshaha liiskaaga koontada Google My Business ee bilaashka ah. Markaad yeelato lahaanshaha, waxaad sare u qaadi kartaa liiskaaga si aad u muujiso mid sare oo natiijooyinka raadinta ah iyo raadinta laxiriirta.
Haddii aad ku jirto darajada Khariidadaha Google ama aad ka dhex muuqanayso Xidhmada Maxalliga ah (sida kor lagu arkay) ee bogagga natiijooyinka caadiga ah (tani waa wax la samayn karo), ganacsigaaga asal ahaan waxa uu kor u qaadayaa laftiisa 24/7. Xitaa si ka sii wanaagsan, waxaad si toos ah ugu daabici kartaa qoraallada liiska Google-kaaga, adigoo hor marinaya dacaayad soo jiidasho leh dhegeystayaashaada waqti ay ujeedo sare leeyihiin.
Si aad u qoto dheer u gasho habkan aadka u bilaashka ah, ee waxtarka leh ee kor u qaadida ganacsigaaga, booqo 13 Google My Business Optimizations ee 2020.
2. Hel website
Ganacsi kastaa wuxuu u baahan yahay degel, iyadoon loo eegayn sida uu u duugoobay ganacsigaaga ama macaamiishu. Websaydhkaaga ayaa u ah macaamiisha hadda iyo kuwa mustaqbalka leh. Xitaa haddii ay kaa helaan warbaahinta bulshada ama Google, waxay rabi doonaan inay tagaan boggaaga oo, sida liiska Google-kaaga, waxay u adeegtaa si kor loogu qaado ganacsigaaga saacad kasta.
Shabakadda ganacsi ee wanaagsani maaha oo kaliya u adeegta sidii qalab xayaysiis ah oo laf ahaantiisa ah — waxay u sheegaysaa sheekada ganacsigaaga iyo waxa aad bixiso, waxay bixisaa macluumaadka xidhiidhka, oo ka tarjumaysa shakhsiyadda astaantaada iyo astaamaha lagu garto - laakiin sidoo kale waxay lama huraan u tahay cabbirka iyo hagaajinta guusha xeeladahaaga kale ee xayeysiinta.
Tusaale ahaan, marka aad wado xayeysiisyada, waxaad u baahan tahay bogag degitaan, kuwaas oo ku nool mareegahaaga. Markaad ku dhejiso macluumaadka waxtarka leh ee warbaahinta bulshada, waa inay ku xidhaa gurigeeda mareegahaaga. Dhammaan kanaalada suuq-geynta ee ku qulqulaya mareegahaaga, waxaad isticmaali kartaa falanqaynta si aad u aragto xeeladaha sida ugu fiican u shaqeynaya oo aad u hesho aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan dhagaystayaashaada.
Inkasta oo ay jiraan xalal bilaash ah oo gebi ahaanba bilaash ah si aad u hesho goobta ganacsigaaga, ku dhawaad ​​lama huraan waxaad u baahan doontaa inaad u guurto nooc ka mid ah website-ka lacag bixinta haddii aad dhab ka tahay horumarinta ganacsigaaga. Lahaanshaha magac domain kuu gaar ah, muuqaal xirfad leh iyo dareemo, iyo awoodda aad u cabbiri karto oo aad ku dari karto sifada hadba sida loo baahdo ayaa dhamaantood lama huraan u ah koritaanka.
3. Hirgelinta ayna search engine
Waa hal shay oo aad kor u qaadayso ganacsigaaga; waa shay kale in Google uu kor u qaado ganacsigaaga. SEO waa hab-dhaqameedyo ku habboon ganacsigaaga darajada Google ee algorithm. Laakiin sababtoo ah algorithm-kani waxa uu u kobcay isticmaalka barashada mashiinka iyo habdhaqanka isticmaalaha si loo soo saaro natiijooyinka ugu saxsan uguna tayada badan ee baadhayaasha, hagaajinta makiinadaha raadinta runtii waa uun wanaajinta raadinta - gaar ahaan kuwa raadinaya waxaad u baahan tahay inaad bixiso.
SEO kaliya maahan hal xeelad, laakiin farsamooyin badan oo si wada jir ah uga wada shaqeeya hagaajinta darajadaada. Sidoo kale, sababta oo ah Google wuxuu leeyahay natiijooyin heersare ah oo ku salaysan goobta, waxaad haysataa fursad aad u badan sida tafaariiqlayaasha waaweyn si ay uga muuqdaan bogga koowaad ee Google-adoon kharash-garayn dime! (Marka laga reebo kharashyada lagu helo mareegaha, dabcan).
Xeeladaha SEO si kor loogu qaado ganacsigaaga waxaa ka mid ah:
Ku darida ereyada muhiimka ah ee khuseeya (warshada- iyo goobta-ku-saleysan) meelo gaar ah oo ka mid ah mareegahaaga.
Soo saarista asalka, nuxur tayo sare leh si joogto ah, oo leh sawirro calaamadeysan.
Joogteynta xawliga rarka bogga sare iyo amniga.
Si aad u hesho tabo SEO oo dheeri ah, ka eeg qoraalkan 10ka Qodob ee ugu sarreeya Google ee 2020 (+Sida loo hagaajiyo iyaga).
Marka ganacsigaagu uu sareeyo natiijooyinka, Google asal ahaan waxa uu u xayeysiinayaa ganacsigaaga adiga—oo cidna maaha, laakiin dadka raadinaya waxa aad bixinayso. Aad ugama roona taas.
4. Abuur blog ganacsi
Waxaan tan ku taabnay istaraatijiyaddii hore, laakiin nuxurku waa darawal muhiim ah oo SEO ah oo runtii u qalma qaybtiisa gaarka ah sida istiraatiijiyad xayeysiis ah. Blog-ga maaha LiveJournal ganacsiyada. Hubaal, waxaad samayn kartaa qaar ka mid ah qoraalada ku saabsan marxaladaha iyo dhacdooyinka, laakiin blog ganacsi oo faa'iido leh ayaa ah mid soo saara waxyaabo waxbarasho, codka sumadda, agagaarka su'aalaha iyo shuruudaha macaamiishaada ugu fiican ay ka raadinayaan Google.
Tusaalaha boostada blog-ka ee la beegsaday ee saaxiibadayada LOCALiQ
Su'aalahan iyo ereyadan waxaa loo yaqaan 'keywords keywords', iyo inta badan ee aad soo saarto adoo beegsanaya ereyadan muhiimka ah, fursadaha badan ee aad u abuurto ganacsigaaga si aad u muujiso boggaga natiijooyinka raadinta raadinta. Qoraallada blog-ga weyn waxay noqon karaan mid ka mid ah kuwan soo socda:
Sida loo sameeyo iyo fariimaha tilmaamaha
Liisaska xeeladaha iyo agabka (10ka sare, 5 ugu fiican, 3 muhimka ah, iwm.)
Q&A ama qoritaanka wareysiga khabiirka warshadaha
Maqaalka hoggaanka fikirka
Markhaatiyada macaamiisha ama daraasadaha kiis
Qoraallada xilliyeedka ah (sida kan oo kale)
Si aad u hesho caawinaad raadinta ereyada muhiimka ah iyo abuurista qoraallada blog-saaxiibtinimo ee SEO, eeg ilahan:
Waa maxay Content SEO? Hagaha Abuurista Mawduuca SEO
Talooyin SEO ah Blog oo loogu talagalay kuwa aan SEO ahayn
5. La wadaag macluumaadkaaga
Blog-ga oo tusinaya khibradaada, u dhawaanshaha, iyo rabitaanka dhabta ah ee lagu caawinayo dhagaystayaashaada ayaa ah agabka xayaysiinta ugu fiican ee ganacsiga. Markaa kaliya ha daabicin qoraallada—kor u qaad iyaga! Warbaahinta bulshada, iyada oo loo marayo wargeysyada iimaylka, ama xitaa u beddel hage la soo dajin karo si ay kaaga caawiyaan ururinta hoggaaminta. Weli ka sii wanagsan, haddii aad soo saarto nuxur maskaxda ku haysa la wadaagi karo, qoraaladaada balooggu waxay u badan tahay in ay ogaadaan mareegaha kale ee lagu kalsoonaan karo kuwaas oo sheegi doona oo ku soo celin doona goobtaada boggooda ama warbaahinta bulshada - iyaga oo kor u qaadaya ganacsigaaga adiga.
6. Orod Google Ads
Iyadoo SEO ay kaa caawin doonto inaad gaarto sare ee boggaga natiijooyinka, waa istaraatijiyad wakhti dheer ah oo qaadan karta toddobaadyo, xitaa bilo si aad u bilowdo inaad aragto natiijooyinka. Si aad u hesho wax badan oo degdeg ah, iyo haddii aad leedahay miisaaniyada, Google Ads ayaa ah jidka loo maro. Xayeysiisyada Google-ku waxay ka muuqdaan meelaha ugu sarreeya bogga natiijooyinka mashiinka raadinta, oo ka sarreeya liiska organic iyo kuwa maxalliga ah. Iyo makiinadaha raadinta ee la heli karo, Google ilaa hadda waa kan ugu caansan ma aha oo kaliya sababtoo ah waxay xakameynayaan saamiga ugu badan ee taraafikada raadinta, laakiin sidoo kale sababtoo ah heerka sare ee dabacsanaanta, sifooyinka dhismaha xayeysiiska, iyo cabbirada waxqabadka faahfaahsan.
In kasta oo maaraynta Xayeysiiska Google ay qaadanayso waqti iyo sidoo kale tijaabo iyo khalad badan, olole la wanaajiyey ayaa aad ugu qalma maalgashiga. Xayeysiisyada Google-ka waxa lagu samayn karaa xayaysiisyada qoraalka ah ee Shabakadda Raadinta ama xayaysiisyada calaamadeysan ee Shabakadda Bandhigga. Waxaad ka eegi kartaa koorsadayada shilalka Google Ads halkan.
Haddii aad horeba Google-ka xayaysiis ugu samaynaysay, arag sida ololeyaashaadu *run ahaantii* uga shaqaynayaan darajada waxqabadka xayaysiisyada Google ee bilaashka ah
Sida loo horumariyo ganacsigaaga addoo isticmaalaya hagayaal online ah
Macaamiishu waxay si joogto ah u booqdaan hagaha khadka si ay u raadiyaan oo u hubiyaan ganacsiyada ku habboon baahiyahooda gaarka ah. Goobahani waxay u muuqdaan inay yihiin shabakado ganacsi oo sarreeya, shabakado muddo dheer taagnaa oo leh awood domain sare, markaa maaha wax aan caadi ahayn in boggaaga profile ama magaca ganacsigaagu ka soo muuqdo bogga koowaad ee Google iyada oo loo marayo mid ka mid ah boggan. Liisaska intarneedka ma qaadan waqti dheer in la abuuro waxayna kaa caawin karaan kor u qaadida joogitaankaaga onlaynka, kor u qaadida meheraddaada u dhow, macaamiisha ujeedo sare leh.
7. Ku samee liisaska hagayaasha waaweyn
Goobaha hagaha yaryar ayaa xogta ka soo saara kuwa waaweyn, taas oo macnaheedu yahay in adiga oo liisaska ka abuuraya boggaga waaweyn, waxaad sidoo kale u badan tahay inaad si toos ah u bilaabi doonto muujinta hagayaasha yaryar. Hoos waxaa ku yaal liiska hagayaasha waaweyn ee lagu bilaabayo. Dhammaantood waa bilaash, laakiin badanaa waxay leeyihiin ikhtiyaarro lacag ah oo loogu talagalay sifooyin horumarsan.
Google (fiiri xeeladda #1)
Tilmaamaha niche ee lagu dabaqi karo sida TripAdvisor, Liiska Angie, iwm.
Foursquare (Inkasta oo ay u dhimatay goob bulsho ahaan, xogteeda waxa isticmaala kumanaan goobood.)
Bogag Jaalle/Cad ah
Si aad u qoto dheer u hesho, ka eeg qoraalkan ku yaal 10ka Goobood ee Liiska Maxaliga ah ee Bilaashka ah.
8. Wanaaji liiskaaga
Waa hal shay in la sameeyo liis, laakiin waa wax kale in la hagaajiyo. Adiga oo buuxinaya goob kasta oo ku jira profile-yadaada, ku dara sawirada, iyo ururinta faallooyinka, waxaad hagaajin kartaa rafcaanka ganacsigaaga oo aad ka sarraysiin kartaa tartamayaasha raadinta. Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in macluumaadkaaga ku jira dhammaan liistooyinkaagu ay waafaqsan yihiin macluumaadka boggaaga. Iswaafaqla'aantu waxay sababi kartaa in Googku kor u qaado sunnaha aaminaaddaada. Ugu dambeyntii, hubi inaad la socoto liiskaaga oo aad hagaajiso wixii khalad ah, taas oo dhici karta marka liiska si toos ah loo buuxiyo. Siyaalo badan oo aad ku tayayn karto liiskaaga, isticmaal isla qoraalka aan ku xidhay xagga sare (laakin halkan ayaan ku xidhi doonaa sababtoo ah).
9. Hel dib u eegista macaamiisha online
Waxaan soo sheegnay aruurinta dib u eegista, laakiin sababtoo ah dib u eegista ayaa aad muhiim ugu ah ganacsiyada yaryar iyo kuwa maxaliga ah, waxay u qalmaan qaybtooda.
Erayga afka waa mid ka mid ah, laga yaaba, habka ugu xoogga badan ee kor loogu qaado ganacsigaaga dadka saxda ah. Marqaatiyada ku yaal degelkaaga ayaa ah mid aad u fiican, laakiin dib u eegista lagu sameeyo aaladaha rasmiga ah sida Google, Facebook, iyo Yelp ayaa xitaa ka sii fiican.
Websaydhyadani waxay kordhin karaan soo-gaadhistaada, sababtoo ah waxay leeyihiin tallaabooyin ay kaga hortagayaan faallooyinka been abuurka ah ama spamka ah, dadku waxay ku kalsoon yihiin faallooyinka halkan in ka badan meel kasta oo kale. Waxaa dheer, dib u eegista ayaa ah qodobka ugu weyn ee qiimeynta natiijooyinka raadinta maxalliga ah. Si aad u hesho faallooyin, eeg qoraaladan:
Sida Loo Codsado Dib u Eegis (Tusaaleyaal)
Hel faallooyin badan oo Google ah oo wata 16-kan tabaha la isku dayay iyo kuwa runta ah
10. La soco oo ka jawaab faallooyinka
Hagayaal badan oo khadka ah ayaa u oggolaanaya qof kasta inuu ku daro liis, markaa xitaa haddii aadan liis gareyn ganacsigaaga, waxaa laga yaabaa inay weli halkaas ku jirto, ururinta faallooyinka. Hubi inaad sheegato liiskaaga meel kasta oo suurtogal ah, oo si joogto ah ula soco boggan. Sidan ayaad uga jawaabi kartaa faallooyinka-taasoo ah hab kale oo wanaagsan oo lagu horumarinayo ganacsigaaga. Ma aha oo kaliya inaad xalliso (iyo xitaa dib u noqosho) dib u eegista taban, laakiin habka aad uga jawaabto faallooyinka (togan iyo taban) waxay muujin kartaa qiyamka sumaddaada waxayna siin kartaa macaamiisha suurtagalka ah fikrad ah waxa ay jeceshahay in lagula sameeyo ganacsi.
Sida loo horumariyo ganacsigaaga baraha bulshada
Baraha bulshada waa hab kale oo xor ah oo aad ereyga ku heli karto ganacsigaaga yar. Koontooyinka ganacsi ee ugu caansan waa Facebook, Instagram, LinkedIn, iyo Twitter, laakiin iska hubi inaad tixgeliso isticmaalka boggaga kale ee laga yaabo inay gaar u yihiin niche, sida Pinterest ama Reddit.
11. Kala hormarin Facebook
Facebook waa shabakada bulsho ee ugu weyn ee online ah waxayna noqon kartaa hab fiican oo lagula xiriiri karo macaamiisha hadda jirta iyo in la gaaro macaamiil cusub. Ku xayeysiinta ganacsigaaga Facebook aad ayey u kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran warshadahaaga, laakiin kuwani waa qaar aasaasi ah:
Samee bog ganacsi oo Facebook ah oo leh macluumaadkaaga xiriirka iyo CTA.
Isticmaal dhacdooyinka Facebook si aad kor ugu qaaddo oo aad sare ugu qaaddo ka qaybgalka dhacdooyinkaaga.
Orod fadhiyada tooska ah ee Facebook, ee casharrada ama muuqaallada qarsoon ee gadaashiisa.
Siyaalo badan oo aad ku horumarin karto meheraddaada addoo isticmaalaya Facebook, ka fiirso boostadayada 22 Facebook Talooyin Suuqgeynta ee Meheradaha Yaryar ee Miisaaniyadda.
Oo ha iloobin xayeysiisyada Facebook!
Xayeysiiska Facebook wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gaarto dhagaystayaal gaar ah, maadaama aad bartilmaameedsan karto iyadoo loo eegayo macluumaadka astaanta isticmaalaha sida xaaladda guurka, shaqada, danaha, iyo in ka badan. Si aad u bilowdo ama xitaa aad u horumariso xayaysiiskaaga Facebook, ka eeg boostadayada 8-da ugu wanaagsan (iyo bilaashka ah!) Koorsooyinka Xayeysiisyada Facebook heer kasta.
Haddii aad horeba Facebook ugu xayaysiisey, iska hubi inaadan ku lumin wax kharash ah oo aad ku isticmaaleyso Grader Performance Performance Facebook!
12. Ku xidh oo wax ku biir LinkedIn
LinkedIn waxay noqotay wax ka badan meel lagu dhejiyo resumeygaaga khadka tooska ah; sidoo kale waa meel aad kaga qaybgasho wadahadal kooxeed, kula xidhidh macaamiisha iman kara, samaynta shuraakowga cusub, ama kaliya in la sameeyo isku xidhka guud ee internetka. Macaamiisha suurtagalka ah waxay ku eegi karaan adiga ama shirkaddaada ka hor inta aysan kula ganacsan si ay u ogaadaan inta shaqaale ee aad haysato iyo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda shaqaalaha shirkadda.
Waxa kale oo aad si dadban ugu xayeysiin kartaa ganacsigaaga LinkedIn adiga oo siinaya aragtiyo wada-hadal kooxeed iyo/ama bixinta xidhiidhinta waxyaabaha khuseeya mareegahaaga. Kaliya iska hubi inaadan had iyo jeer kor u qaadin macluumaadkaaga.
13. U soo rog muqaal YouTube
Suuqgeynta Fiidiyowga waa hab wanaagsan oo lagu horumariyo ganacsigaaga, YouTube-na wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku sameyso bilaash! Horumarinta ganacsigaaga YouTube waa hab wax ku ool ah oo lagu caawinayo macaamiisha mustaqbalka ama macaamiisha inay ku xidhmaan ganacsigaaga. Isku-dubarid muuqaal guud oo degdeg ah oo ku saabsan ganacsigaaga ka dibna ku dhejinta YouTube waxay ku siinaysaa qalab wax lagu gato oo wanaagsan oo aad ku dhejin karto bogga hoyga ee mareegahaaga ama u gudbiso iimaylo macaamiisha mustaqbalka ah.
Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa fiidiyowyo waxbarasho, casharro, ama sida loo sameeyo kanaalkaaga YouTube si ay u ogaadaan dadka raadinaya waxa ganacsigaagu bixiyo. Waxaa jira fursado badan oo la awoodi karo oo halkaas ka jira samaynta fiidiyowyada; Kaliya iska hubi boostadayada DIY-ga fiidiyowyada guriga. Waxa kale oo aad ku dari kartaa fiidiyowyada qoraalladaada blog kuwaas oo kor u qaadi kara tayada SEO, sida qoraalkan WordStream ee hoose:
Ogow sidoo kale in fiidiyowyadu u muuqdaan inay ka soo baxaan natiijooyinka raadinta aadka u wanaagsan, mararka qaarkoodna meesha ugu sareysa, sida kan:
14. Ku xayeysiiso YouTube
Sida xeeladaha kale ee lacagta lagu bixiyo ee lagu sheegay boostadan, xayaysiinta YouTube waxay noqon kartaa maalgashi faa'iido leh haddii si sax ah loo sameeyo. Waxaad ku xayaysiin kartaa YouTube adiga oo abuuraya xayaysiis fiidyow ah oo ciyaara ka hor fiidiyowyada qaybaha khuseeya, ama xayaysiisyada qoraalka ee ka muuqda natiijooyinka raadinta:
15. Ka qaybgeli dhagaystayaashaada Instagram
In kasta oo uu yahay mid ka mid ah aaladaha warbaahinta bulshada ee dhowaan la bilaabay, Instagram waa madal saddexaad ee ugu caansan halkaas. Iyada oo leh qaababkeeda dhajinta ee kala duwan (sawiro joogto ah, Sheekooyin gaaban, taxane IGTV, fadhiyada tooska ah, Sheekooyinka Muhiimka ah, iyo in ka badan), waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo Instagram si aad u dhexgeliso dhagaystayaashaada oo kor loogu qaado ganacsigaaga. Waxaad awoodaa:
Kor u qaad iibintaada iyo la macaamilka hashtags si aad u balaariso gaadhistaada.
Ku orod tartan alaab/adeeg bilaash ah ama qiimo jaban si aad u dhaliso guux togan (oo aad u hesho liis tilmaamo si aad u gaadho).
Sii talo iyo casharro si aad ugu soo baxdo kheyraad la tago.
Siyaalo badan oo kor loogu qaado ganacsigaaga Instagram, hubi kuwan 11 tabaha suuqgeynta Instagram.
16. La wadaag Twitter-ka
Twitter waa kanaal kale oo bilaash ah oo loo isticmaali karo in lagu hormariyo meheraddaada onlayn - badiyaa haddii dhagaystayaashaadu ay ka kooban yihiin 18-24 sano jir. Waxay u egtahay inay u baahan tahay xoogaa firfircooni dheeraad ah si loo dhiso dhagaystayaal, laakiin haddii aad si joogto ah u fir fircoon tahay, waxaad baran kartaa goobta oo aad la kulmi karto faa'iidooyinkeeda.
Waxaad horumarin kartaa alaabtaada ama adeegyadaada:
Ama si fudud ugu martiqaad macaamiisha dhow inay joogsadaan:
17. Sii Pinterest tallaal
Iyadoo Pinterest ay asal ahaan diiradda saarayso wadaagista sawirada, xaqiiqda ah in sawiradaadu ay ku soo celin karaan boggaaga internetka waxay abuurtaa fursad aad ku horumarinayso ganacsigaaga oo aad u wado taraafikada goobtaada.
Pinterest waxay si gaar ah u awood badan tahay ganacsiyada ecommerce ee raadinaya inay gaadhaan dhagaystayaal dhedig ah (Isticmalayaasha Pinterest waxay si weyn ugu leexdeen dhanka tirada dumarka). Haddii tani ay ku habboon tahay astaantaada, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto inaad firfircoonaato shabakadda Pinterest.
18. Isku day TikTok
TikTok waxaa la bilaabay kaliya 2016, laakiin waxay mar hore dhaaftay Twitter, LinkedIn, Snapchat, iyo Pinterest isticmaaleyaasha firfircoon. Isticmaalka fudud ee abuurista fiidiyowyo soo jiidasho leh oo leh saameyn gaar ah ayaa ka dhigaysa goob suuq-geyneed weyn oo fiidiyoow ah - oo aan ahayn kaliya Zillenials. Waxaad toos uga boodi kartaa masraxa si aad u bixiso sida loo sameeyo, casharo, ama muuqaalo muuqaal ah, laakiin waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kor u qaaddo kanaalkaaga cusub ee Tik Tok ee shabakadaha kale, sida tusaalaha hoose:
19. Ku biir bulshooyinka internetka
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee gacanta kor loogu qaadi karo waa in gacan la siiyo dadka kale. Ku biir bulshooyinka iyo kooxaha khuseeya ganacsigaaga ama warshadaha LinkedIn, Reddit, iyo Facebook, oo dadka sii talo iyo tusaale wanaagsan marka ay dhibaatooyin ama su'aalo qabaan. (Hubi in macluumaadka boggagaagu ay dib ugu soo celinayaan meheraddaada, dabcan.)
Tani waa hab wanaagsan oo lagu dhiso sumcad dhab ah oo aad xiriir adag la sameyso dadka khuseeyo shaqadaada. Waxa ku hareeraysan guud ahaan way soo wareegaan. Xasuusnoow intaad qof ka caawinayso waydiintiisa, in ay ku eegayaan kun kale oo aamusan oo arki doona magacaaga iyo waxaad samaynayso.
20. Isku day wadashaqeyn suuqgeyn saameyn leh
Meheraddaadu waxay noqon kartaa qayb ka mid ah bulshooyinka ku salaysan juqraafi ahaan iyo niche-duur-saar labadaba, iyo saamayn-bixiyeyaashu waa dad caan ah oo ku dhex jira goobtaada. Kuma jiraan rooga cas ama martigelinaya bandhigyada hadalkooda, laakiin waa kuwo aad loo ixtiraamo, caan ka ah, iyo khubarada si qoto dheer loogu kalsoon yahay ee meeshaada. Saamaynayaashu waxay leeyihiin warbaahinta bulshada iyo/ama baloogga soo socda, taas oo macnaheedu yahay in lagu xuso ama lagu soo bandhigo mid ka mid ah kuwan saamaynta ku leh waxay kor u qaadi kartaa ganacsigaaga dhegaystayaal ballaaran oo khuseeya.
Si kastaba ha ahaatee, suuqgeyntu waa xeelad taxaddar leh. Kahor intaadan la xiriirin wax saameeya, qaado wakhti aad ku barato akoonadooda shabakadaha oo dhan; wax ka sheeg, like, oo la wadaag nuxurkooda; oo hubi inaad u wajahdo weydiimo gaar ah iyo wax qiimahoodu siman yihiin oo beddelaad ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad siiso hal bil oo xiisado bilaash ah si ay dib ugu eegaan blogkooda oo ay uga sheegaan warbaahinta bulshada. Ama waxaa laga yaabaa inaad soo bandhigto inaad ku qorto boosteejo marti ah oo tayo sare leh oo ku taal balooggooda taasoo faa'iido u leh dhagaystayaashooda iyagoo sidoo kale siinaya dib-u-eegis boggaaga.
Waa kuwan tusaale saameyne ku leh niche baabuurta (David Patterson) oo kor u qaadaya dukaanka baabuurta maxalliga ah:
Oo halkan waa tusaale ka mid ah saameeyayaasha guriga iyo niche barbaarinta (Letica Barr) kor u qaadida FabFitFun:
21. Maalgelinta xayaysiisyada warbaahinta bulshada
Xayeysiisyada warbaahinta bulshada ayaa ka mid ah noocyada xayaysiisyada dhijitaalka ah ee maanta loo fakarayo, si weyn looga faa'iidaysanayay. In ka badan 3.6 BILYAN oo qof ayaa isticmaala oo si joogto ah ayay u kobcaysaa si ay u bixiso fududaan-isticmaalka iyo qiimo gaar ah dollarkaaga xayaysiis. Marka si sax ah loo sameeyo, bulsheed ee lacagta la bixiyo ayaa kor u qaadaysa ganacsigaaga daawadayaasha aadka loo bartilmaameedsado oo leh faa'iidooyinkan:
Aqoonta: Mdadka ku nool kanaalada ay inta badan isticmaalaan.
Waxtarka qiimaha: Bartilmaameedka sare wuxuu hubinayaa in xayaysiisyadaada la tuso dhagaystayaasha ugu khuseeyo oo kaliya.
Waxyaabaha taageeraya: Qoraaladaada organic-ga ah waxay u adeegaan inay taageeraan qoraaladaada kafaala qaaday.
Sumadda daacadnimada: Soo jiidashada taageerayaal badan akoonnadaada waxay gacan ka geysataa dhisidda bulshada iyo daacadnimada agagaarka ganacsigaaga.
Analytics: Ogow waxa shaqaynaya si aad ugu qoondayso miisaaniyadaada si waafaqsan.
Sida loo horumariyo ganacsigaaga bulshadaada
Meheradaha maxalliga ah, bulshadu waxay qayb muhiim ah u tahay guushooda. Tafaariiqleyaasha iyo makhaayadaha ayaa tan si daah u fahma, dabcan, iyo xitaa ganacsiyadaas oo diiradda saaraya adduunka ballaaran ayaa weli xiriir la leh goobta ama meelaha ay ka shaqeeyaan. Taasi waxay tidhi, aan ka hadalno dhowr siyaabood oo aad kor ugu qaadi karto ganacsigaaga bulshadaada.
22. Ku dadaal inaad hesho saxafada maxaliga ah
Sababaha qaar, fikradda ah inaad u soo bandhigto dhacdooyinka ganacsigaaga saxaafadda maxalliga ah waxay dareemeysaa cabsi, laakiin runtu waxay tahay, baloogyada maxalliga ah, wargeysyada, daabacaadaha internetka had iyo jeer waxay raadiyaan waxyaabo cusub.
La xidhiidh ilaha wararka deegaankaaga oo arag haddii aad wax ku biirin karto maqaal — hadday tahay qayb hogaamineed fikir, liis agab ah, ama war cusub oo ku saabsan ganacsigaaga. Haddii sheekada meheraddaadu ay tahay mid kugu filan, waxaa laga yaabaa inaad xitaa awooddo inaad hesho qof kale inuu daabaco qoraal muuqda.
Waxa kale oo aad codsan kartaa in aad wax ka qorto dhacdo aad bulshadaada ku marti galinayso, ama ku casuun qoraa maxali ah in uu ka soo qayb galo lacag la'aan si aad u soo koobto.
Haddii aad haysatid wax yar oo miisaaniyad ah, waxaad xitaa tixgelin kartaa lammaane xiriirka dadweynaha, shirkad, ama app si aad sheekooyinkaaga ugu daabacdo ilo badan oo warbaahin ah. Haddii miisaaniyadaadu ay yara hoosayso, waxaad ku daabici kartaa war-saxaafadeedyadaada shirkadaha sida www.prweb.com. Waxaa laga yaabaa in war-saxaafadeedyadan ay soo qaadaan xarumaha warbaahinta qaarkood waxayna sidoo kale kaa caawin karaan hagaajinta mashiinka raadinta adiga oo dib ugu soo celinaya xiriiriyeyaasha boggaaga.
Waxaad ku baran kartaa sida loo qoro war-saxaafadeed weyn halkan.
23. Samee shuraako
La shaqaynta ganacsiyada aan tartanka ahayn ee u adeega isla macaamiishu waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu horumariyo ganacsigaaga shabakada deegaankaaga. Marka aad samaysato xidhiidh, waxaad isku gudbin kartaan adeegyada midba midka kale adiga oo isticmaalaya liisaska iimaylka iyo warqadaha dukaanka dhexdiisa ah ama kuuboonnada, ama adoo ku hawlgelinaya warbaahinta bulshada. Ha ka baqin inaad hesho hal-abuur si aad u kordhiso qiimaha xayaysiinta ee iskaashiga.
24. Shabakadda shabakadda
Ka qayb galka dhacdooyinka isku xidhka maxaliga ahi waa hab fiican oo lagu kordhiyo joogitaankaaga bulshadaada. Tani waxay si fiican ugu shaqeysaa noocyada ganacsiyada qaarkood marka loo eego kuwa kale. Haddii aad si toos ah u siiso adeegyada ganacsiyada kale ee yaryar ama macaamiisha, markaa isku xidhka maxaliga ahi waxa uu noqon doonaa mid aad uga faa'iido badan marka loo eego haddii aad wax ku iibiso khadka, tusaale ahaan. Si kastaba ha ahaatee, nooc kasta oo ka mid ah isku xidhka ayaa caawiya, xitaa haddii ay tahay kaliya in la wadaago fikradaha iyo dhiirigelinta milkiilayaasha kale ee ganacsiga.
Haddi ay noqoto khadka tooska ah ama khadka tooska ah, farsamooyinka suuq gaynta ee jaban ee kuwan oo kale ah waxa ay ka heli karaan meheraddaada in ay ku kobciso tamarta macaamiisha iyo macaamiisha cusub.
Oo haddii aad ka qayb qaadato isku-xidhka (ma isku dayo inaan kuu sheego sida aad noloshaada u noolaan lahayd, laakiin waa inaad), ha moogaan sagaalkayga iimaylka shabakadaha ah, sida kan hoose:
25. Ka soo qayb gal, marti geliso, ama kafaala qaado dhacdooyinka maxaliga ah
Xataa aduunka ku sii kordheysa dhijitaalka, ka qaybgalka, martigelinta, ama kafaala qaadida dhacdooyinka bulshadaada waa hab fiican oo aad kor ugu qaadi karto ganacsigaaga adigoo xoojinaya xidhiidhka aad la leedahay macaamiisha deegaanka.
Waxaad ku wadi kartaa fasal goobtaada, waxaad bixin kartaa inaad wax ku dhigto dugsi, maktabad, ama dhismo kale oo maxalli ah, ama xitaa kaliya martigeliso dhacdo xilliyeed oo madadaalo leh iyo/ama qoyska ku jihaysan. Ka faa'iidayso wakhtiga aad galisay abuurista iyo baridda fasalka adiga oo saaxiib kaa qaadaya fiidiyow wax ku baraysa, ka dibna ku dheji muuqaalkaaga mareegahaaga iyo YouTube-ka.
26. Isku day inaad dirto toos ah
In kasta oo ay maanta gacanta ku hayaan warbaahinta dhijitaalka ah, dirida kaararka boostada, waraaqaha waraaqaha, waraaqaha, ama noocyada kale ee waraaqaha ayaa weli noqon kara hab aad waxtar u leh oo kor loogu qaado ganacsigaaga macaamiisha kuu dhow. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee habkan xayeysiinta ah ayaa ah inaadan si sax ah u beegsan karin fariimahaaga, markaa waxaad u baahan doontaa inaad daabacdo oo aad dirto mug sare oo waraaq ah si aad jawaab u hesho. Faa'iidada ayaa ah in haddii aad si sax ah u hesho, ku dhiirrigelinta ganacsigaaga boostada waxay kaa caawin kartaa inaad hesho macaamiil cusub hanaan aad loo soo celin karo.
Waxa kale oo aad u diri kartaa macaamiishaada daacada ah xidhmooyin hadiyado yar inta lagu jiro ciidaha si ay dib ugu soo laabtaan iyo (badanaa) u xayaysiinta ganacsigaaga asxaabtooda iyo qoyskooda.
27. Ku xayeysiiso gudaha iyo dibaddaba
Wargeysyada, majaladaha, raadiyaha, iyo xitaa telefishinada ayaa ah meelo kale oo dhaqameed oo wax lagu bixiyo si kor loogu qaado ganacsigaaga. Haddii aad ka fekereyso inaad ku dhiirrigeliso ganacsigaaga xayeysiisyada daabacan ama mid ka mid ah xeeladahan khadka tooska ah, furaha ayaa ah inaad hubiso inaad wax walba raadineyso si aad u ogaato waxtarka. Si aad u hesho tabo xayeysiis maxalli ah oo dheeraad ah, madaxa halkan: 10 Fikradaha Xayeysiinta Maxalliga ah ee Waxtarka leh ee Ganacsiyada Yaryar
Siyaabaha kale ee waxtarka leh ee kor loogu qaado ganacsigaaga
Saddexdan xeeladood ee xayeysiiska ah ayaa ugu dambeeya laakiin xaqiiqdii waa ay yar yihiin — way kala duwan yihiin marka la eego habka aan u ururiyay xeeladaha qoraalkan.
28. Ka qaybgal bandhigyada ganacsiga
Haddii aad beegsanayso daawadayaasha qaranka oo aad rabto inaad ka iibiso alaabtaada tafaariiqlayaasha, tagitaanka bandhig ganacsi oo weyn ayaa laga yaabaa inay macno samaynayso. Haddii aadan hubin sida ay faa'iido u leedahay bandhigga ganacsigu kuu noqon doono, oo aad haysato wakhti aad ku ogaan karto, waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad ka qaybgasho booqde ahaan ka hor inta aanad lacagta gelin qolkaaga. Haddii aad xiriir wanaagsan la leedahay shirkad horeyba u qorsheyneysay bandhigga bandhigga ganacsiga, waxaa laga yaabaa inay kuu oggolaadaan inaad "joogto" goobtooda wakhti qayb ka mid ah, halkaas oo aad ku ilaalin karto oo aad wax ku baran karto, iyo laga yaabee xitaa inaad kor u qaaddo ganacsigaaga bilaashka ah. lacag.
29. Orod ololaha suuq-geynta iimaylka
Suuqgeynta iimaylka waxa ay jirtay da'da, laakiin istaraatijiyadu sinaba uma noqon mid waxtarkeedu yaraado muddo ka dib. Dhab ahaantii, 77% dadku waxay door bidaan inay helaan farriimaha xayaysiis ee ku salaysan oggolaanshaha iyaga oo isticmaalaya iimaylka iyo hababka kale ee isgaarsiinta. Iimaylku waa kanaal caan ah oo loogu talagalay macaamiisha iyo ganacsiyada si isku mid ah:
Dadku waxay jecel yihiin inay la socdaan.
Dadku waxay si joogto ah u eegaan iimaylkooda
Iimaylku wuxuu bixiyaa warbixin faahfaahsan.
Waxaad u kala qaybin kartaa liiskaaga iimaylada la beegsaday, ee la gaaryeelay.
Suuqgeynta iimaylka waxa ay dhalisaa celcelis ahaan 30x soo celinta maalgashiga.
Goobaha suuq-geynta iimaylka ayaa bixiya dabacsanaan, hal-abuur, iyo tan ugu muhiimsan, fududaynta isticmaalka.
Si aad u hesho tilmaamo badan oo ku saabsan isticmaalka suuq-geynta iimaylka, fiiri boostadayda sida loo qoro iimaylada xayaysiinta ee aan la tirtirin.
30. U doodo ka samee shaqaalahaaga
Hoggaaminta wanaagsan iyo la dhaqanka habboon ee shaqaalahaaga ayaa si dabiici ah u beddeli doona u doodayaasha ganacsigaaga. Qabo fadhiyo maskaxeed, dhiiri geli tabarucaada boostada ee shaqaalaha, marti geliso wada sheekaysiga dabka, ka qaybgal dhacdooyinka maxaliga ah, socodsii qoyska iyo saaxiibbada - qiimee iyaga oo waxay qiimayn doonaan ganacsiga ay u shaqeeyaan. Waxaad markaa dhiirigelin kartaa wadaaga warbaahinta bulshada oo aad ku qalabayn kartaa wararka iyo agabka si ay si dadaal la'aan ah ugu faafiyaan ereyga ganacsigaaga.
Gunta hoose: waxaad si wax ku ool ah u horumarin kartaa ganacsigaaga lacag la'aan ama lacag la'aan
Waxaa jira fursado badan marka ay timaado horumarinta ganacsigaaga, iyada oo aan loo eegin miisaaniyadaada. Hirgelinta xeeladaha ku jira qoraalkan waa hubaal inay faa'iido yeelan doonto, gaar ahaan haddii aad si joogto ah dib u eegto oo aad dib u eegto istiraatiijiyaddaada.
Wax badan ayaan kaga soo hadalnay qoraalkan, haddaba aan dib u soo koobno ​​si aan arrimaha u soo koobno:
Abuur oo xaqiiji Xogta Ganacsiga Google-kaaga
Bilow blog ganacsi
La wadaag waxyaabahaaga
Orod Google Ads
Ku samee liisaska hagayaasha waaweyn
Hel faallooyinka macaamiisha onlaynka ah
La soco oo ka jawaab faallooyinka
Horay usii Facebook
Ku xidh oo wax ku biir LinkedIn
Ku daabac fiidiyowyada YouTube
Ku xayaysii YouTube
Ka qayb gal dhagaystayaashaada Instagram
Sii Pinterest tallaal
Isku day TikTok
Ku biir bulshooyinka khadka tooska ah
La kaasho wax saameeya
Ku xayaysii baraha bulshada
Raadi saxaafadda maxaliga ah
Shabakad, shabakad, shabakad
Marti geli, ka qayb gal, ama kafaala qaado dhacdooyinka maxaliga ah
Soo dir fariin toos ah
Isku day xayaysiis qad la'aanta maxaliga ah
Ka qaybgal bandhigyada ganacsiga
Dir iimaylo suuqgeyneed
Samee u doodayaasha shaqaalaha
5 Fikradaha Suuqgeynta Macluumaadka ee Diisambar 2020
Sida loo ogaado Isticmaalka Sare ee Admin-Ajax ee Boggaga WordPress